> Household wear>Single pedestal desk
Single pedestal desk-steel top with central lockable3side drawers and 1 center drawer. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်၊ ဘေးအံဆွဲ (၃)ခုနှင့် အလယ်အံဆွဲ (၁)ခုပါဝင်ပြီး ဘေးတိုင်ခုံတစ်ခုတည်းပါရှိသော အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။
Single pedestal desk-steel top with central lockable3side drawers and 1 center drawer. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်၊ ဘေးအံဆွဲ (၃)ခုနှင့် အလယ်အံဆွဲ (၁)ခုပါဝင်ပြီး ဘေးတိုင်ခုံတစ်ခုတည်းပါရှိသော အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W106.7*D66*H75.9 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၆.၇၊ အနံ ၆၆၊ အမြင့် ၇၅.၉ စင်တီမီတာ